Abalandeli be-Twitch bamahhala | Thenga Abalandeli be-Twitch | I-Streampular
Thenga Abathandekayo Abalandeli
Abalandeli Bamahhala be-Twitch
Thenga ukubukwa kwesiteshi se-Twitch
Thenga ababukeli be-Live Twitch
Thenga iHashtags Ucwaningo Nokusebenziseka Kwephrofayili
Thenga abathengi be-Instagram
Thenga Abalandeli Abazenzekelayo Nge-Instagram
Thenga Abalandeli be-Instagram base-USA / UK
Thenga okuthandwa ngu-Instagram
Thenga Ukuthandwa Okuzenzakalelayo Kwe-Instagram
Thenga Ukuthandwa kwe-IGTV
Thenga ukubukwa kwe-Instagram Reels
Thenga ukuvela kwe-Instagram nokufinyelela
Thenga Ukubukwa kwe-IGTV
Thenga amazwana we-Instagram
Thenga iziphesheli ze-Instagram Marketing Package
Abasebenzisi be-Instagram Abamahhala
Thenga abalandeli be-Pinterest
Thenga okuthandwa ngu-Pinterest
Thenga i-Spotify Abalandeli
Thenga abalandeli be-Spotify Playlist
Thenga abathengi be-Twitter
Thenga amazwana we-SoundCloud
Thenga Ukulanda kwe-SoundCloud
Thenga okuthandwa ngu-SoundCloud
Thenga i-SoundCloud Plays
Thenga i-SoundCloud Reposts
Thenga TikTok Fans / Abalandeli
Thenga I-TikTok Views
Thenga Izabelo ze-TikTok
Thenga TikTok Amazwana
Thenga i-YouTube SEO
Thenga isenzo sephakheji le-YouTube
Thenga ababhalisile be-YouTube
Thenga amahora wokubuka we-YouTube
Thenga amazwana we-YouTube
Thenga ukushumeka kwe-YouTube
Thenga izinto ze-YouTube
Ukubukwa kwamahhala kwe-YouTube
Bhalisa / Ngemvume
Abalandeli be-Twitch bamahhala | Thenga Abalandeli be-Twitch
Khulisa Isiteshi Sakho Se-Twitch Ngokushesha Kunangaphambili Ngabalandeli Bamahhala Be-Twitch!
Sebenzisa insizakalo yethu ukuthola abalandeli be-Twitch bamahhala abangempela nabaqondiswe ku-niche yakho, noma mane uthenge abalandeli be-Twitch ukuze bakhule ngokushesha okukhulu.
Thola Abalandeli Be-Twitch Bamahhala or Thenga Abathandekayo Abalandeli
Izici Key & Izinzuzo
Uma ungenankinga ngokuthatha imizuzu embalwa usuku ngalunye ukwenza kusebenze uhlelo, sinikeza izinketho ezinhle kakhulu ezinikezela abalandeli abangafika kwabangu-10 nokuthandwa kwamahhala kwe-Twitch ngosuku.
Abasakazi abanjengawe basebenzisa le nsizakalo yokushintshanisa ukuthola ababhalisile emuva naphambili phakathi kwabanye abasakazi.
Kuphephile, Kuphephile, Kuphephile
Insizakalo ye-Streamular`s iphephile futhi ivikelekile! Iziteshi zeTwitch azihlawuliswa ngokusebenzisa insizakalo yethu futhi sisebenza ngobumfihlo, ukuphepha nokugcina imfihlo ngokuqinile.
Uma ukhetha ukuzikhandla futhi uzitholele ngokuzenzakalela abalandeli beTwitch nokuthandayo usuku ngalunye, lapho-ke sincoma uhlelo olukhokhelwe lokuthola umzamo omkhulu, ukukhula kwansuku zonke!
Ngifuna Abalandeli Be-Twitch Bamahhala Manje!
Landela lezi zinyathelo ezilula futhi ukhulise ukukhula kwesiteshi sakho seTwitch ngemizuzu!
Bhalisela & Ukungena
Thuthukisa Isiteshi Sakho
Abalandeli Abakhulayo Be-Twitch Mahhala
I-Twitch ingelinye lamapulatifomu omphakathi akhula ngokushesha kwi-Intanethi. Ngabalandeli abangaphezu kwezigidi ezimbili abasakazwa njalo ngenyanga, iTwitch ayithandwa nje ngabantu abasha kuphela kodwa nezizukulwane ezindala. Kusuka kumavidiyo ajabulisayo kuya kumageyimu aku-inthanethi, abasebenzisi bangathola noma iluphi uhlobo lokuqukethwe abakufunayo.
Ingxenyekazi enkulu kunazo zonke yokusakaza bukhoma
Ubuwazi ukuthi iTwitch iyipulatifomu yokusakaza ividiyo enkulu kunazo zonke emhlabeni? Ngemuva kokwethulwa kwayo kokuqala, ithole izivakashi eziyizigidi eziyisishiyagalombili. Namuhla, ama-Twitch enza cishe i-8% yayo yonke imali engenayo eyenziwe ngokuqukethwe kwamageyimu aku-inthanethi. Empeleni lapho abasakazi bukhoma basakaza khona okuqukethwe kwabo kubalandeli babo. Akukhawulelwe nje emidlalweni eku-inthanethi - isigaba se- "Creative" siyatholakala kubaculi ukukhombisa ngomsebenzi wabo kubasebenzisi.
Ngaphandle kokuzijabulisa, iTwitch ibuye ibe ngumphakathi osebenzayo lapho labo abanezintshisakalo ezabiwe nezinto zokuzilibazisa bengathola umbandela abavumelana ngawo. Ukusebenzisana ngamakamelo okuxoxa kanye nokuhlaziya okubukhoma kwenza isipiliyoni seTwitch sixhumeke futhi sibe nomdlandla. Ngokuxhuma abalandeli ngama-streamers, iTwitch inikeza ipulatifomu elizinzile labasebenzisi ukubuka okuqukethwe okuthakazelisayo okutholakala ngendlela yokusakazwa okude, okubukhoma.
Kungani kufanele ngibe nabalandeli kuTwitch?
Hhayi nje ukubuka okuqukethwe, kepha iTwitch isibe ngumthombo obalulekile wemali engenayo kubasakazi abaningi. Labo abasakazayo bavamise ukwazi ukuthi ababukeli abaningi bazobuya futhi babe ngabalandeli. Inani elikhulu labalandeli lingasiza ekuthuthukiseni idumela lakho njenge-streamer.
Uma udinga abalandeli ngokushesha futhi ufuna ukwenza umzamo omncane kukho, ungathenga abalandeli be-Twitch ukuze uthuthukise umfutho wakho wokukhula.
Eminyakeni yakamuva, iTwitch isize ama-streamer ukuthola inani elikhulu lemali engenayo. Abasakazi kuTwitch bangazuza imali ngezindlela ezahlukahlukene, njengokuthola imali evela kuzikhangiso, iminikelo, okubhaliselwe, ukuthengisa, kanye nezixhumanisi ezihambisanayo. Abasebenzisi beTwitch abahamba phambili benze ukusakaza kube inketho yokusebenza efanelekile, abanye abasebenzisi behola imali efinyelela ku- $ 350,000 njalo ngenyanga. Lokhu kusho ukuthi uma unentshisekelo yokwenza iTwitch indawo yakho yokusebenzela, kunezindlela eziningi zokudala ongazisebenzisa njengomthombo wemali engenayo.
Uma ufuna ukuqala ukuzuza nge-akhawunti yakho yeTwitch, udinga ukuba nobulungu beTwitch, okungenzeka kuphela uma unabalandeli abancane abangama-50 esiteshini sakho seTwitch. Inani elikhulu labalandeli lisiza ukuthuthukisa idumela lakho njenge-streamer futhi likwenze kube lula kuwe ukukhiqiza imali engenayo futhi udume kuTwitch.
Ngaphandle kwemali engenayo, kunezizathu eziningi zokuthi kungani kufanele ucabange ukukhulisa inani labalandeli beTwitch onabo njengamanje. Ake sibheke ezinye zazo ngezansi:
1. Ukuqwashisa ngomkhiqizo
Ukuthola ukuqashelwa komkhiqizo kuphakathi kwezinhloso zokumaketha ezibaluleke kakhulu. Uma ufuna ukukhulisa ibhizinisi online, kufanele ulibeke eqhulwini. Lokhu kungenxa yokuthi abathengi bazofuna ukusebenzisa izinsiza zabo kumikhiqizo abayibonayo.
Imithombo yezokuxhumana iyithuluzi elihle elenza ukwakhiwa komkhiqizo okusebenzayo futhi okusheshayo. Kuyasiza ukuthola umkhiqizo wakho phambi kwabanye ngokushesha futhi kalula. Ivumela izethameli ukuthi zibone umkhiqizo wakho kaningi, futhi noma abantu bengacabangi ngemikhiqizo yakho.
Ukwakhiwa komkhiqizo kuncike kakhulu ekubukekeni, ngakho-ke zinike isikhathi sokutshala imali lapho ukhona online. Layisha izinto ezibukekayo ezifana nekhava enhle nezithombe zephrofayela. Yenza imininingwane ngawe itholakale kalula, kufaka phakathi ukuthi ungubani, wenzani, iziteshi zakho zemidiya yokuxhumana nabantu, nokuthi ungathintwa kanjani.
2. Ukuxhumana ngesizathu
Enye yezindlela ezisheshayo zokuqwashisa nganoma iyiphi inkinga ukuthumela ngayo ezinkundleni zokuxhumana. Okuqukethwe kungathunyelwa kaningi, okusiza ukukwenza kubonakale kubantu abaningi. Uma uzama ukuqoqa ukunakwa komphakathi ngesizathu esithile, ukurekhoda nokukuphromotha kuTwitch kungakusiza ukufezekisa le nhloso.
Okuqukethwe okuhle kungadonsela kalula ababukeli abaningi futhi kukwenze udume. Ukusebenzisa ama-hashtag afanele kungasiza ukuqondisa abantu kusuka kumaphrofayili abo ezokuxhumana nabantu ekhasini lakho lomkhiqizo futhi ekugcineni kuwebhusayithi yakho uma unayo. Lokhu kukunika inzuzo enhle kakhulu ekutshalweni kwemali.
3. Ukwanda kwezimoto
Ukuba khona kwezokuxhumana okuqinile kukwenza ukwazi ukwandisa ithrafikhi kokuqukethwe kwakho. Njengoba imithombo yezokuxhumana inegalelo ekwandeni kwethrafikhi yesiteshi sakho, ithrafikhi oyithola ezinjinini zokucinga nayo iyanda. Ukusiza ngale nqubo, kubalulekile ukuthi ucabange ngalokho okuthumelayo nokuthi wabelana kangakanani ngokuqukethwe. Ukucabanga ngalezi zinto kuzokuvumela ukuthi ukhombe umthengi ofanele futhi kuthuthukise imizamo yakho yokuthengisa online.
4. Amathuba okukhula
Ukuthuthukisa umphakathi oqinile wabalandeli online kusho ukuthi ungaba nethonya. Lokhu kungahumushela kuwe ukuthola amathuba amaningi okusiza ukuqhubekisela phambili ibhizinisi lakho online. Amaphromoshini akhokhelwayo, ukusebenzisana, kanye nokufaka uphawu lokwenza uphawu kungavula iminyango yamathuba amaningi okuyisa ibhizinisi lakho ezingeni elilandelayo.
Isibonelo, uma wakhe ngempumelelo isisekelo somlandeli oqinile kuTwitch ngokuqukethwe kwakho kwemidlalo, abanye abazama ukufeza okufanayo nokwabo bangakucela ukuthi wenze i-solo noma ubeke amazwana nabo. Impumelelo yalokhu kubambisana ingahumushela kokubili imali engenayo nabalandeli benu nobabili.
5. Ulwazi lwezintshisekelo zababukeli nezintandokazi zabo
Njengoba isisekelo sakho somlandeli sikhula, uthola ukufunda kabanzi nge-niche yakho. Zijwayeze ukulalela emphakathini, okuyisenzo sokubuka izingxoxo ngezihloko ezixhunywe esiteshini sakho. Lokhu kuzokusiza uqonde ukuthi izethameli zakho zithini. Ukusebenzisana nabo kumagumbi okuxoxa kuzokusiza futhi ukuthi ubone ukuthi izithameli zakho zilwa nani futhi zakha okuqukethwe okubakhanga kakhulu.
Ukuxhumana kangcono nezithameli zakho, kuyasiza ukubuka ithoni nolimi abantu abalusebenzisa ukuxhumana. Kungaba nokwehluka ohlotsheni lokuxhumana okwenzeka phakathi kwabantu abasha nezizukulwane ezindala. Cabanga ukuthi ngubani ongathanda ukukhomba futhi ukopishe okuqukethwe kwakho ngokufanele.
6. Ukuxhumana okuningi
Ngokwanda okukhulayo, uzobe uhlangana nabanye abasebenzisi abangahle babe ukuxhumana okuhle onakho. Ngaphezu kokuba nesisekelo sabalandeli abathembekile, ungathuthukisa nokuxhumana nabasakazi bokuqukethwe kontanga, izintatheli, abacwaningi, njll. Ukuxhumana ngakunye kunethuba lokuthi ukhulise isiteshi sakho ngenkathi usiza abanye abasendleleni.
7. Ukuthengisa okuningi
Lapho uthola inani elikhulu labalandeli, okuqukethwe kwakho kuzovela kukhange kakhulu, futhi uzothola ukuthengisa okuningi. Iphinde ikunikeze onqenqemeni lokuncintisana ngaphezu kwabanye abahlinzeka ngohlobo olufanayo lomkhiqizo. Isibonelo, uma uqhuba uhlelo lwamahlaya kuTwitch futhi unabalandeli abayi-100,000, kanti umuntu oqhudelana naye onikeza uhlobo olufanayo lokuzijabulisa unabalandeli abayi-100 kuphela, amathuba okuba abalandeli abangahle bavumelane nesiteshi sakho esikhundleni sabo. Ukuba nabalandeli abaningi kwenza isiteshi sakho sisebenze emphakathini ngoba sithuthukisa ukuthembeka kwakho njengomhlinzeki wokuqukethwe okuhle nokujabulisayo.
8. Ukuthandwa kokuqukethwe
Izithameli eziningi zingasiza ekusakazeni okuqukethwe kwakho kabanzi. Ukudala nokwabelana ngokuqukethwe okuhle nsuku zonke kuyasiza ekusakazeni okuqukethwe kwakho phakathi kwamanethiwekhi wakho kanye namanethiwekhi wabalandeli bakho. Uma imizamo yakho yokumaketha iphumelela, izithameli zakho zingabelana ngemidlalo yakho izikhathi ezingamakhulu noma eziyizinkulungwane usuku ngalunye. Cabanga ngohlobo lomthelela okuzoba nawo kumkhiqizo wakho nakuwe njengomsakazi / umdali.
9. Izinga lokuzethemba elithuthukisiwe
Ekupheleni kosuku, uzozizwa wanelisekile ngeqhaza olibambile ekuhlanganiseni iqembu labantu abanezintshisakalo ezifanayo nezintshisekelo ezifanayo. Ukuba ngumhleli waleli qembu kuzokusiza ukuthi uzizwe uziqhenya ngokufezile. Impumelelo yakho izosiza ekuthuthukiseni ukuzethemba nokholo onakho kuwe ngenkathi ikunikeza ubuchwepheshe bokuqhubeka ucwenga umsebenzi wakho.
Ngingakhulisa kanjani abalandeli esiteshini sami seTwitch?
Ukwandisa inani labalandeli onabo kuTwitch kungatholakala ngezindlela ezahlukahlukene. Uma ufuna ukukwenza ngokukhokha imali, lokho kuhle. Kepha uma ufuna ukuthola abalandeli abaningi mahhala, lokho kungcono kakhulu!
Nali iqiniso mayelana nokusebenzisa iTwitch njengomkhiqizi wemali engenayo: ingakusiza kakhulu uma unenani elikhulayo labalandeli esiteshini sakho. Ekuqaleni, kungathatha umzamo ngaphambi kokuthi uqale ubone abalandeli abaningi. Ngokuhlela ngokucophelela nangamasu, uzobe usendleleni yokwenza umsebenzi ophumelelayo nge-akhawunti yakho yokusakaza.
Uma ufuna ukuthola abalandeli beTwitch mahhala, kunezindlela eziningi ongakwenza ngazo lokho. Ngakolunye uhlangothi, uma ufuna ukusebenzisa imali ethile kubhajethi yakho yezentengiso yemidiya yezenhlalo, kunezinketho eziningi zalokho futhi. Kodwa-ke, kuhlale kunconywa ukuthi uqede izinketho zakho zamahhala ngaphambi kokuphendukela kokukhokhelwe.
Izinzuzo zokukhula kwabalandeli beTwitch mahhala
Uma usaqala ngesiteshi sakho seTwitch, sebenzisa izindlela zamahhala ekuqaleni ukukhulisa abalandeli bakho. Ikuvumela ukuthi uvivinye imibono yakho ngendlela efanele isabelomali. Kuyakusiza nokuthi uqonde ukuthi ungasikhulisa kanjani kangcono isiteshi sakho unikezwe amasu ahlukahlukene amahhala nakhokhelwayo akhona.
Ngalokho, ake sibone ezinye izindlela ongakhulisa ngazo abalandeli bakho beTwitch mahhala.
1.Sebenzisa i-Streamular.com Yabalandeli Abamahhala be-Twitch
Ufunda le ndatshana ku-Streamular.com, umhlinzeki oholayo wabalandeli beTwitch yamahhala, ngakho-ke kunengqondo ukuthi sisho insizakalo yethu. Yize sinokwenzelela, sithuthukise ipulatifomu yethu ukuthi ibe nobungani obedlulele futhi isebenziseka kalula kunoma ngubani ofuna ukuthola abalandeli beTwitch mahhala. Ngokumane ulandele abanye abasebenzisi beTwitch bezintshisakalo ezifanayo, ngokubuyisela, inethiwekhi yethu inabanye abasebenzisi beTwitch bezintshisakalo ezifanayo abakulandelayo.
Ungasebenzisa uhlelo lwamahhala nsuku zonke bese ubuya usuku nosuku ukuze uphinde ulusebenzise futhi. Ngakho-ke, ukuvumela ukuthi ukhule ngokungapheli i-akhawunti yakho yeTwitch mahhala.
Uma ungenasithakazelo sokwenza umsebenzi wokuvakashela i-Streamular.com nokulandela amanye amaphrofayili noma kunini lapho ufuna abalandeli abaningi be-Twitch, khona-ke ungangena kuhlelo olukhokhelwayo, oludinga ukuthi ulandele abantu abangu-0 bese luzisebenza ngokuzenzakalela, uletha abalandeli bakho profile nsuku zonke ngaphandle kwesidingo sokuphakamisa umunwe noma ubuyele kuwebhusayithi.
Izinkulungwane zabasebenzisi beTwitch ziqala ukuthola abalandeli bamahhala beTwitch ngensizakalo yethu, kepha ngemiphumela ephumelela kakhulu, sincoma ukwenza ezinye izinto ukukhulisa okulandelayo. Sicela ufunde ukuze ufunde ngezindlela eziningi zokukhulisa abalandeli bakho beTwitch mahhala.
2. Bheka iziteshi zeTwitch eziqhutshwa abanye abasakazi
Ukuba yingxenyekazi yomphakathi, iTwitch ingakusiza kuphela uma wenza ukuxhumana kuyo. Ungakwenza lokhu ngezindlela eziningana. Khuluma nabanye abasakazi futhi ubuke okuqukethwe kwabo okusakazwayo. Hlanganyela nabo emagumbini okuxoxa futhi uphendule imiyalezo evela kubo bobabili abasakazwayo nabalandeli. Khombisa intshisekelo yokwazi okwengeziwe ngokuqukethwe kwabanye futhi ubancome ngolwazi lwabo noma uma uthola okuqukethwe kwabo kuthakazelisa.
Lapho abanye abasebenzisi bebona ukuthi unentshisekelo futhi unobungane, bazofuna ukukulandela emuva. Uma umsakazi odumile enquma ukukulandela, amathuba okuba abalandeli babo nabo baqale ukukulandela.
Ukwakha ubudlelwano nabanye abasakazwayo kuyazuzisa njengoba nikwazi ukucela ukusingathwa noma ukwenyusa ngisho iziteshi zakho. Ubambiswano lungaholela ekuvezweni okuhle komkhiqizo wakho futhi lungakha kakhulu ubunikazi bomkhiqizo wakho. Lapho wakha ukubambisana okunjalo, qiniseka ukuthi unentshisekelo yangempela yokwenza ubungani nabanye abasebenzisi. Lokhu kungakusiza uvikele ukuba nedumela lomuntu ocela kuphela abanye ukuzinyusa.
3. Iya emicimbini eku-inthanethi nakuma-meetups
Ukwazi abanye abasebenzisi nabalandeli uqobo kukusiza ukuthi uqoqe ulwazi oluningi ngezintshisekelo zabantu nokuthi babona kanjani futhi basebenzise iTwitch. Zama ukuxhuma nabantu abangaphandle kweTwitch. Iya emihlanganweni eku-inthanethi, izingqungquthela, kanye nemihlangano efanayo yezenhlalo lapho uzokwazi khona abanye kangcono.
Ungase futhi ukhethe ukuya emicimbini yokusakaza noma emihlanganweni yemidlalo yevidiyo ebanjwa minyaka yonke emadolobheni amakhulu emhlabeni jikelele. Kungenye yezindlela ezinhle kakhulu zokukhulisa abalandeli beTwitch mahhala, wenze abangane abasha, futhi ufunde ukuthi abanye benzani. ISupanova, iMineCon, neTwitch Con yiminye imicimbi edumile yeTwitch ongaya kuyo. Ungabheka futhi i-Facebook ne-Twitter ngama-Twitch meetups amancane okungenzeka ukuthi akwenzeka edolobheni lakho noma ku-inthanethi.
Indlela enhle yokwenza ukuxhumana emicimbini ukukhipha ikhadi lakho lebhizinisi phakathi kwababekhona. Qiniseka ukufaka igama lakho lomsebenzisi kuTwitch kanye nezixhumanisi eziya kwamanye ama-akhawunti wakho wezokuxhumana. Kuyasiza ukuba nalolu lwazi olumayelana nawe lutholakale kalula ngoba abanye bangasheshe baxhumane nawe kusuka kumadivayisi wabo lapho bethola ulwazi.
4. Sebenzisa amanye amawebhusayithi ezokuxhumana
Abasebenzisi abaningi beTwitch abakwazi ukubaluleka kokusebenzisa ezinye iziteshi zabo zokuxhumana ukwenza ngcono ukuvezwa komkhiqizo wabo. Yilapho abasebenzisi abaphezulu beTwitch basebenzisa kakhulu amanethiwekhi abo. Amasayithi afana ne-Instagram, Twitter, ne-Snapchat asiza ukuhola abasebenzisi be-Twitch ukuvuselela abalandeli babo nokuxhumana nabo njalo.
Kufanele usebenzise kakhulu iziteshi zemithombo yezokuxhumana ngoba lokho kungakusiza ukuzethula wena nomkhiqizo wakho kubalandeli abazohlala ezingxenyeni ezahlukahlukene zomhlaba. Ezweni lanamuhla elinobumbano olukhulu kakhulu, imithombo yezokuxhumana ingasiza ekuvaleni izikhala zomzimba futhi yenze izilaleli zijabule ngezintshisekelo nemisebenzi efanayo.
Ungasebenzisi nje ama-akhawunti wakho wezokuxhumana ukuze uthumele izibuyekezo ngempilo yakho. Yisebenzise ukutshela abalandeli bakho ngokuqukethwe okusha. Ungasebenzisa futhi iziteshi zakho ukuba nezingxoxo nabalandeli bakho ngendlela yokuvota noma i-Q & A exhumanayo lapho ungafuna khona impendulo kokuqukethwe kwakho noma umane uzihlanganise nabo. Lokhu kuzosiza ukwakha isithombe esihle somkhiqizo wakho abalandeli abazolindela ukuhlangana nawo.
Khumbula ukuthi ukuthumela ama-tweets azenzakalelayo mayelana nokuqukethwe kwakho kwe-Twitch kungahle kungabi njengokuzibandakanya. Esikhundleni salokho, ungakhetha ukwabelana ngezintshisekelo zakho, amaphrojekthi osebenza kuwo, izinto ozithandayo, noma uvuselele nokuthi ukusakazwa kwakho okulandelayo kuzoba yini. Lokhu kuzosiza ukwenza isiteshi sakho senziwe ngezifiso kakhulu.
5. Thuthukisa inqubo yokusakaza
Ufuna ukwakha okuthembekile okulandelayo kuTwitch? Namathela esimisweni sokusakaza esingaguquguquki futhi esivamile. Buyekeza izithameli zakho kusenesikhathi maqondana nokuthi kufanele zingene nini ukubuka okuqukethwe kwakho. Dala ishejuli bese wabelana ngalo nezithameli zakho. Le yindlela enhle yokwakha ukwethembana nabantu nokukhuthaza ukubukwa kwansuku zonke.
Ukwamukela uhlelo lokusakaza oluhambisanayo ngeke kumane kukwenzele ukuthembela kubantu. Kuzokusiza ukusungula njengochwepheshe owenza umsebenzi wabo wokusakaza ngokungathi sína futhi ohlose ukwabelana ngokuqukethwe okuhle. Uma ungafaki futhi unamathela esimisweni sansuku zonke, khona-ke ababukeli abathanda okuqukethwe kwakho futhi abafuna ukubona okuningi kwakho ngeke babe nokuningi abazokubona. Ngenxa yalokho, bazodlulela esiteshini somunye umuntu seTwitch noma nakwezinye izingosi zokuxhumana.
Lapho usuqale ukuheha abalandeli, kubaluleke kakhulu ukubagcina bebandakanyekile uma unentshisekelo yokwakha umsebenzi wokuba ngumsakazi. Ama-streamer amaningi enza iphutha lokungathuthukisi uhlelo lokwabelana ngokuqukethwe njalo. Ukusebenza ngokwesheduli kuzokusiza ukuthi uhlale uhlelekile futhi uhlukanise isiteshi sakho kwesabanye abangaguquguquki njalo.
Yabelana ngesheduli yakho yokuqukethwe nezibukeli zakho ukubazisa lapho bengalindela ukukuthola kuTwitch. Faka lokho ozobe udlala futhi ngasiphi isikhathi. Uma, ngasizathu simbe, kukhona izinguquko ohlelweni lwakho, khumbula ukusebenzisa iziteshi zakho zemidiya yokuxhumana nabantu noma okuphakelayo kwesiteshi seTwitch ukuxhumana nezethameli zakho mayelana noshintsho. Lokhu kuzovumela ababukeli abanentshisekelo ukuthi babheke phambili kokuqukethwe kwakho lapho kuvela futhi kubanikeze nesizathu sokubuyela esiteshini sakho ngokuzayo.
Enye into ukuthi kufanele uqinisekise ukusakaza okuqukethwe kaningi. Ukusakaza kaningi futhi isikhathi eside kwandisa amathuba akho okuqashelwa abantu. Ngokunikeza ababukeli bakho okuqukethwe okuningi, ubanikeza inani lezinsizakusebenza zabo, okuzoba nomthelela omuhle ekuthembekeni kwabo nasekutshalweni kwemali esiteshini sakho.
Ukwazi kabanzi mayelana nokuthi ungabathola kanjani abalandeli beTwitch bamahhala, sithumele umyalezo lapha, futhi sizojabula ukuxoxa ngezinketho ezahlukahlukene nawe!
Kungani ngidinga abalandeli be-Twitch yamahhala?
Sonke siyazi ukuthi ukuba nabalandeli abaningi beTwitch kunezinzuzo eziningi ku-akhawunti yakho yeTwitch. Uma unabalandeli abaningi, ujwayele ukuthola ukuthandwa okuningi, amazwana amaningi, nokubukwa okuningi.
Lokhu kusiza impela labo abazama ukuziphilisa noma ukuthola ukuvezwa besebenzisa iTwitch. Ngemuva kweminyaka yokuba ngabaholi embonini ye- "Free Twitch Followers", sithuthukise uhlelo olungu-100% lwamahhala lwabasebenzisi ukuthola abalandeli abaningi beTwitch nsuku zonke. Zikhwalithi ephezulu futhi ziqondiswe kuzintshisekelo zakho.
Ngabe laba balandeli beTwitch bangokoqobo?
Empeleni sihlinzeka abalandeli bangempela kumakhasimende ethu akhokhelwayo, ngokungafani nama-98% amawebhusayithi laphaya. Iningi lamawebhusayithi lithi linikela ngale nsizakalo yamahhala, kepha akunjalo! Siyakwazi ukuhlinzeka ngale nsizakalo yamahhala ngoba wonke umlandeli otholwa ngokusebenzisa isevisi yethu yokulandela okulandelayo ngomunye umsebenzisi onjengawe
Isevisi yethu umphakathi ovumela abantu abathanda ukucabanga ukuthi batholane futhi baxhumane. Singumlamuleli nje. Ungakhohliswa amasayithi athi anikezela abalandeli bangempela. Bekuhlale kushiwo ukuthi uma kubukeka kukuhle kakhulu ukuthi kungaba yiqiniso, kungenzeka ukuthi kungukuthi… futhi kube sobala ngokuphelele, kufanele sazi ukuthi ikhwalithi yabalandeli iyohluka. Lokhu kungenxa yokuthi abanye abantu bamane bafaka umzamo omkhulu kuma-akhawunti abo kunabanye. Lokhu kuyafana nokushiwo ngeTwitch isiyonke.
Ngakho-ke, ungethuki uma umzuzu owodwa umkhiqizo opholile ukulandela futhi ngomzuzu olandelayo umuntu ojwayelekile onezithombe ezimbalwa akwenzayo. Akunandaba ukuthi uhla lwabalandeli bonke abathunyelwa kuwe, bakhethwa kuzintshisakalo ezifanayo ozikhethile ngenkathi ubhalisela inkonzo yethu.
Ngibagcina kanjani abalandeli bami beTwitch?
Kubalulekile ukuthi wazi ukuthi kungumsebenzi wethu ukuletha abantu abasha ekhasini lakho leTwitch mahhala.
Kungumsebenzi wakho ukubagcina lapho. Ucwaningo lukhombisa ukuthi uma ikhasi lakho lingenakho okuqukethwe okuningi noma linganikeli ngokuqukethwe okusha nokubandakanyayo njalo izinombolo zakho zizokuwa.
Senza konke okusemandleni ethu ukuhlinzeka abantu abanezintshisakalo ezifanayo. Lokhu kusho ukuthi ukucabanga ukuthi ikhasi lakho lihlinzeka ngokuqukethwe mayelana nezintshisekelo ozikhethile ngaphambi kokusebenzisa uhlelo lwamahhala noma olukhokhelwayo kungenzeka ukuthi ugcine futhi ukhulise ikhasi lakho.
Ochwepheshe basikisela ukuthi ukuthumela okuqukethwe kwekhwalithi izikhathi ezingu-1-3 ngosuku kubonakala kudonsa imiphumela emihle kakhulu. Kubalulekile ukuthatha isikhathi sakho ngokuthunyelwe kwakho. Qiniseka ukuthi izithombe / amavidiyo asezingeni eliphakeme futhi ahlobene nengqikimba ye-Instagram yakho. Okokugcina, qiniseka ukuthi uxhumana nezithameli zakho. Uma bephawula kokuthunyelwe kwakho qiniseka ukubaphendula. Futhi cabanga ukuvakashela ikhasi labo futhi ubanikeze okuthandayo noma okubili. Kuzoqhubeka ngendlela uma kukhulunywa ngokwakha ubudlelwano besikhathi eside nekhasi lakho.
I-6th Meyi 2022
Isetshenziswa Kanjani Imidlalo Ye-Twitch Ukukhulisa Imali Yeminikelo?
Ukuqoqwa kwezimali akufani nakudala. Nge-inthanethi, ukuqoqwa kwezimali kwedijithali sekufinyelele kwelinye izinga. Eqinisweni, kukhona amapulatifomu amaningana anikeza inketho...
I-28th Ngo-Ephreli 2022
Amathiphu Wokukhetha Umculo Okahle Wokusakazwa Kwakho Kwe-Twitch
Ukudlala imidlalo yevidiyo kuthatha umsebenzi omningi. Uma ubheka abasakazi abaphezulu, uzothola ukuthi bayakwazi ukuphatha inkundla yempi ngenkathi...
I-13th Ngo-Ephreli 2022
Kungani i-Twitch iyisiteshi esihle sokuthi ama-Beauty Vlogger azame amathrendi e-Makeup
Isikhathi eside, ama-blogger wobuhle agcina ku-YouTube naku-Facebook kuphela. Ngokufika kwe-Instagram ne-Instagram reels, ama-vlogger obuhle bathola indawo entsha. Nokho, ubuhle...
Sinikeza Izinsizakalo Eziningi Zokumaketha
Izinsizakalo zeTwitch Instagram Services Izinsizakalo ze-Twitter Amasevisi we-Pinterest Amasevisi we-YouTube Spotify Services Izinsiza ze-SoundCloud
Abalandeli Ukubukwa kwesiteshi
Imiphumela Qala kumahora we-24-72
Imiphumela Qhubeka Kuze Kuphele
Ayikho iphasiwedi edingekayo
I-100% iphephile futhi iyimfihlo
24 / 7 Ukusekela
Ukuthengwa Kwesikhathi Esiningi - Akukho Okuphindwayo
Ngezinsizakalo ze-Instagram, sicela uvakashele iwebhusayithi yethu yozakwethu, UMrInsta.com. Chofoza lapha ukuze ubuke izinsizakalo zabo ze-Instagram
Idlala Abalandeli bohlu lwadlalwayo Abalandeli
Idlala Play Abalandeli Ukuthandwa Amazwana Izimpindiselo
Ngemisebenzi yakwa-YouTube, sicela uvakashele iwebhusayithi yethu yozakwethu, I-SubPals.com. Chofoza lapha ukubuka amasevisi wabo we-YouTube
Ngabe ufuna abalandeli beTwitch bamahhala, abasezingeni eliphakeme kanye nababhekisiwe nsuku zonke?
Joyina izinkulungwane zabantu asebevele basebenzisa i-Streamular nsuku zonke ukuthola abalandeli bamahhala be-Twitch nokuthandwa kweziteshi zabo!
Othile ku Kuthengwe
Thola Abalandeli beTwitch bamahhala, abasezingeni eliphakeme kanye nababhekiswe ngokuchofoza okumbalwa nje kumhlinzeki othembekile we-Intanethi wezinsizakalo zokumaketha zeTwitch.
Copyright © 2022 Ukusakaza. Wonke Amalungelo Agodliwe. Ibalazwe